I-Plant Extract powder series series - Ababoneleli be-AASraw
/ iimveliso / Ukutsalwa kwetyala
Kule nqaku, sichaza ngokukodwa iimveliso zendalo zokutsalwa, ezifana neBromelain, i-orange enomlilo, njl njl.
I-Bromelain iyi-enzyme efunyenwe kwiphunga le-phayinapple kunye nepinapple stem. Abantu basebenzise amayeza.
I-Bromelain isetyenziselwa ukunciphisa ukuvuvukala (ukuvuvukala), ngokukodwa kwimpumlo kunye nezono, emva kokuhlinzwa okanye ukulimala. Isetyenziselwa i-hay fever, ukunyanga isifo somzimba esibandakanya ukuvuvukala kunye nezilonda (ulcerative colitis), ukususa izicubu ezonakalisiweyo nezonakaliswe emva kokutshiswa (ukukhwabanisa), ukuthintela ukuqokelela kwamanzi kwimpompo (i-edema ye-pulema), izihlunu eziphumayo, ukuvuselela izicathulo zomsila, ukucotha ukunqanda, ukuphucula ukutshatyalaliswa kweziza-antibiotics, ukuthintela umdlavuza, ukunciphisa abasebenzi kunye nokunceda umzimba uphewule amanqatha.
Kwakhona kusetyenziswa ukukhusela ubuhlungu besisu emva kokuzivocavoca. Olu tyenziso luye lwafundiswa, kwaye ubungqina bubonisa ukuba i-bromelain ayisebenzi kulo.
Abanye abantu basebenzisa umkhiqizo (Phlogenzym) we-arthritis (i-osteoarthritis) edibanisa i-bromelain ne-trypsin (iprotheni) kunye ne-rutin (into efumaneka kwi-buckwheat). I-Bromelain isetyenziswe ngale ndlela ibonakala iyanciphisa intlungu kwaye iphucula umsebenzi wegciwane kubantu abane-arthritis.
Akukho ubungqina obunelulwazi obunokwenzululwazi ukuchonga ukuba okanye i-bromelain ayisebenzisiyo nayiphi na enye yezinye zayo.
I-Bromelain ibonakala ibangela ukuba umzimba uvelise izinto ezilwa nobuhlungu nokuvuvukala (ukuvuvukala).
I-Bromelain iqulethe neekhemikhali eziphazamisa ukukhula kweeseli zesisu kunye nokukhawuleza kwegazi.
Iinanapple, umthonyama waseMzantsi Melika kunye nenxalenye ethandekayo yamayeza aseHawaii, enye yemithombo ecebileyo kwihlabathi le-enzyme bromelain. Iqukethe iipopoptidases eziliqela kunye namaqumrhu afana ne-phosphatase, i-glucosidase, i-peroxidase, i-cellulase, i-escharase kunye ne-protease inhibitors. Ngokuqhelekileyo "i-bromelain" ithengiswa kwi-extract or supplement fomu ibhekisela kuma-enzyme ekhishwe kwipinapapuli okanye izibilini, kunokuba zivela kwinyama yesithelo.
Isetyenziswe ngokubanzi njengendlela yendalo yokwelapha ukunyanga yonke into ekukhuphekeni kwintlungu, iinanimpe ayinayo kuphela into enomzimba, kodwa i-vitamin C, i-vitamin B1, i-potassium, i-manganese kunye ne-phytonutrients. Nangona iinanapple ineenzuzo ezininzi, imfihlo yangempela yamandla ayo okuphilisa ngokuqinisekileyo i-bromelain.
Yintoni i-bromelain esetyenziswa ukuphatha? Kwihlabathi lezonyango, eli qela elincomekayo lisetyenziswe ngokuqhelekileyo njenge-artificial anti-inflammatory and anti-inflammatory agent. Uphando luye lwabonisa ukuba lunezixhobo ze-fibrinolytic, antiedematous and antithrombotic, oku kuthetha ukuthintela ukuthintela igazi, i-edema kunye nokuvuvukala. Kwixesha elidlulileyo, le nzyme yayisetyenzisiwe njengethererizer yeenyama, isizathu sokuba kunceda ukuhlaziya nokuphumula, izihlunu ezivuthayo kunye nezicubu ezinxibelelwano. Ukongezelela, uphando olutshanje lufumene ubungqina bokuba le enzyme imisa i-metastasis yamaphaphu kwimizila yayo, ebonisa ukuba i-bromelain ingasetyenziselwa ukuphatha izifo ezahlukahlukeneyo, ezinokuquka umhlaza.
Ukujongwa kwincwadi yezenzululwazi, eziquka i-1,600-kunye namaqaku athile ahlola amayeza e-bromelain, ibonisa ukuba isetyenziselwe ukuphatha uluhlu lweengxaki zempilo, kuquka:
Ukuxhatshazwa kwamathambo, ezifana neenyembezi ze-ACL
I-arthritis, intlungu kunye kunye ne-osteoarthritis
Imiba yokugaya ifana nokugquma okanye urhudo
Izifo ze-Cardiovascular disorders
Isifo sesifo sesisu
Izifo ezenziwe ngeSinus, ezifana ne-bronchitis kunye ne-sinusitis
Ukukhathazeka ngokukhawuleza nokuphulukiswa ngokukhawuleza kwamanxeba esikhumba okanye ukutshisa
Ukungabikho kwamachiza amaninzi, ngokukodwa ama-antibiotics, kunye neempawu ngenxa yokuthatha amachiza
I-orange yamanzi, i-orange orange, i-orange orange, i-orange orange, okanye i-orange marmalade ibhekisela kumthi we-citrus (Citrus × inurantium) kunye neziqhamo zawo. Lizalelwe e-Asia-mpuma ye-Asia, kwaye isasazwe ngabantu kwiindawo ezininzi zehlabathi. Imithi yasendle ifumaneka kufuphi nemifudlana encinci kwiindawo eziqhelekileyo kunye nezinkuni zaseFlorida kunye neBahamas emva kokuba zisiwe kwiindawo ezivela eSpeyin, apho zaqaliswa khona kwaye zahlonywa kakhulu ekuqaleni kwe10th kwinkulungwane yamaMorors. I-orange yamanzi iyathengiswa njengesongezelelo sokondla ngenxa yeempawu zayo ezikhuthazayo, nangona iinkcukacha zokhuseleko zikhoyo kwaye zidibene kunye nemiphumo echaphazelekayo echaphazelekayo kuquka ukubetha kunye nokuhlaselwa kwentliziyo.
Zininzi iintlobo zeelandi ezibuhlungu zisetyenziselwa ioli, kwaye zifumaneka kwi-perfume, zisetyenziswe njenge-flavouring okanye njenge-solvent. Iintlobo zee-orange zaseVilville zisetyenziselwa ukuveliswa kwe-marmalade.
I-orange yamanzi iyasebenza kwakhona kwimithi yamachiza njengento ekhuselayo neyokutya, ngenxa yesithako sayo esisebenzayo, i-synephrine. Iimfomfele zamanzi zentlambo ziye zadibaniswa nemiphumo embi kunye nokufa, kwaye amaqela abathengi akhuthaza ukuba abantu bagweme ukusebenzisa iziqhamo zonyango. Akukagqityiwanga ukuba i-orange entlungu ichaphazela iimeko zonyango zentliziyo kunye nezitho zenhliziyo, ngokwazo okanye kwiifomula nezinye izinto. Izixhobo zokubhaliweyo ezisemgangathweni zikhutshwe malunga nepropati kwi-orange enwabukisayo yiNational Institute of Standards and Technology (NIST), iziqhamo zomhlaba, ukukhupha kunye nesimo somzimba esisisigxina somlomo, kunye kunye nalabo bahlanganiswe ndawonye kwinto enye.
Ebonisa zonke iziphumo 3
Uhlobo ngokuthi sinobomi
Uhlobo by popularity
Uhlobo ngokohlengahlengiso avareji
Uhlobo ixabiso: eliphantsi ukuya phezulu
Uhlobo ixabiso: phezulu ukuya phantsi
Price abantu ireyithingi
Bonisa i-8 Products
Bonisa i-16 Products
Bonisa i-24 Products
PolypodiuM I-extract powder